Sucuudiga khabiirku waa khibrad udub dhexaad ah
Mozenda waa tayo sare leh shabakad oo loo adeegsado
ururinta macluumaadka ku habboon internetka. Mozenda sawir gacmeed ayaa ku duuban hawlaha websaydhka dadka si ay u soo qaataan macluumaadka gaarka ah ee webka. Kaydinta waxaa loogu talagalay in ay soo qaadato macluumaadka aan nidaamsanayn ee ku yaala Internetka oo ay ku kaydinayaan xogta qaababka la akhrisan karo. Mozenda Software Performance
Marka ay timaado cidhib-tirka webka, saxnimada iyo kalsoonida waa laba qodob oo muhiim ah oo la tixgeliyo. Waagii hore, xogta ka soo baxday website-kan ayaa ahaa mid aan la isku halleyn karin oo qaali ah. Nidaamka ugu muhiimsan ee soo rogista macluumaadka muhiimka ah ee webka ku lug leh qorista barnaamijyo gaar ah oo ka shaqeeyey in laga soo saaro xogta laga helo qoraalka waaweyn ee HTML ee bogga internetka. Sanadkii 2007dii, farsamooyinka isdaba-marinta ayaa isbeddelay ka dib markii Mozenda soo saarey barnaamij loogu talagalay xogta jarista laga soo bilaabo website-yada aan barnaamijka lahayn. Barnaamijku wuxuu awood u lahaa inuu aqoonsado qoraalka la door bidayo bogga internetka isagoo isticmaalaya lambarka telefoonka iyo cinwaanka emailka shuruudaha. Tan iyo markaas, waayo-aragnimada wax-soo-saarku waa la hagaajiyay marba marka ka dambaysa.
Macluumaad ballaaran ayaa laga heli karaa internetka si loogu isticmaalo horumarinta istaraatiijiyooyin suuq-gareed iyo ujeedooyin dhiirrigelin. Si kastaba ha noqotee, macluumaadka waa la heli karaa qaabab aan ku habboonayn habka nidaamkaaga. Tani waa halka Mozenda ku soo galo. Macluumaadka laga duubo websaydka oo isticmaalaya Mozenda waa mid u roon sida bilow mashiinkaaga.
Maxay tahay sababta Mozenda loo ciribtiro?
Mozenda scraper webka si sahlan u rogaa xogta webka sirta ganacsiga adoo soo saara xogta qaabab la isticmaali karo. Mozenda waa shaki badan oo ah warshad webka ugu xoogan ee warshadaha. Qalabku waa mid ka mid ah noocyada kala duwan. Sida browserkaaga, Mozenda wuxuu isticmaalaa interface user user friendly saaxiibtinimo. Si aad xogta uga soo qaadato webka, kaliya dooro qoraalkaaga bartilmaameedka, oo ka tago inta kale Mozenda.
Tirinta fiirinta macluumaadka ayaa sidoo kale ah shuruud ku xirnaanta shabakadda. Iyada oo Mozenda, waxaad si wax ku ool ah u ururin kartaa xogta bogagga shabakadaha waqtiyada cayiman, iyada oo aan cadaadis ku saarin qalabka hardware. Ma aha barnaamij, ma jirto meel argagax. Mozenda scraper webka wuxuu bixiyaa sifooyin sare sida FTP, DOM, XPath, RegEx, iyo API.
Haddii aad ka fekereysid in aad shaqaaleysid boqolaal arday oo interneetka ah si aad u hesho macluumaadka nuqul-dhejinta maalin dhan, waxaad u baahan tahay inaad bedesho qorshayaashaada. Iyadoo Mozenda, uma baahnid kombiyeyaashu inay kugu dhisto xalka khafiifinta shabakada khaaska ah. Mozenda waxay leedahay dhammaan hawlaha kaydka webka ee la daboolay. Xogta baahsani waxay kaa sugeysaa internetka.
Faa'iidooyinka ku rakibida Mozenda webka mashiinkaaga
Ka dib markii lagu rakibo Mozenda kumbuyuutarkaaga, uma baahnid kumanaan shaqaale ah si ay ula socdaan geedi socodka burburinta. Tirada shaqaalaha ayaa hoos u dhacda 2. Markaad doorato Mozenda, waxaad ogolaatay inaad gacan ka gashid koox gacan-qabasho leh oo u gooni ah. Haddii aad la kulantid caqabado markaad xogta ka helayso bogga internetka, u sheeg kooxda taageerada Mozenda ee gargaarka.
Kooxda taageerada Mozenda waxay bixisaa adeegyo kulamo iyo adeegyo bilaash ah oo loogu talagalay dadka bilowga ah. Samee go'aanada ganacsiga saxda ah oo dib u eegis xeeladaha mashruuca. Isku duub xogta dhabta ah ee Mozenda webka ee shabakada internetka oo lacag la'aan ah Source .